Ngathi | Yiwu Muran Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Yiwu Muran Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yasekwa ngo-2009, ekuhlanganiseni uphuhliso kunye neentengiso kunye. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya ibrashi yokuhombisa, ibrashi yokuhombisa, isiponji esihle sobuhle, izixhobo zokwenza izinto kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko. Sibonelela iibrashi kubathengi bethu kwimarike yaphesheya. Ngabasebenzi abangama-90 kumzi-mveliso wethu, ngemizamo yabasebenzi bethu, siye saba ngumenzi owaziwayo nothembekileyo webrashi. Ngomsebenzi onobuchule, usebenzisa kuphela izinto ezinobungozi bendalo, ukumilisela inqanaba elipheleleyo lolawulo lomgangatho kwimveliso, sizamile ngokusemandleni ethu ukuqinisekisa umgangatho wemveliso. Kunye neqela loyilo lobuchwephesha, similisela rhoqo ngenyanga iimodeli ezingama-20 zeebrashi zokuhombisa ngokulandela imeko yefashoni. Siyakwazi ukubonelela ngeentlobo ezininzi zeemodeli ngokwezifiso zakho, kunye nokunikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM. Iqela lethu lokuthengisa liya kulandelela yonke inkqubela phambili kuyo yonke iodolo, lilandele nayiphi na ingxelo yabathengi bethu kunye nengcebiso emva kokuhanjiswa, kwaye uhlale unxibelelana nabathengi kwaye uncede ukusombulula nayiphi na imiba. Umbutho waseMURAN uye wazinikela ekuziseni ulwaneliseko kubaxumi bawo. Sinethemba lokuba siza kusebenzisana nawe ngezibonelelo ezifanayo kwaye senze ikamva lethu eliqaqambileyo kunye.
Inkampani yethu ikwanalo neqela eligxile kurhwebo lwangaphandle, olunokunceda abathengi ukuba bathenge iimveliso eziyimfuneko, ukuthenga, ukulandela, ukuhlolwa komgangatho, ukubhukisha, ukulayisha kunye nezinye iinkonzo zokuthumela ngaphandle.
Ngokuhambelana neemfuno zokuseka inkqubo yeshishini lale mihla, iQumrhu loRhwebo lwaNgaphandle le-Yiwu ngenkuthalo lenze uhlengahlengiso lwangaphakathi lwendlela kunye nokuseka ulwakhiwo lolawulo lwendibaniselwano. Inkxaso encinci kurhulumente kwiinkampani zokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle
Sineemodeli zokuthengisa ezizodwa kunye nezakhono zenkonzo egqibeleleyo. Ngeqela leengcali, ulawulo olungqongqo, iimveliso ezigqwesileyo kunye nezixhobo, kunye nesimo sokubandakanyeka kunye nokuvulekileyo, iqela lizama ukwenza "Ubuhle boBuhle baseMpuma kunye nabafazi". Ubuhle kunye nenkcubeko yezempilo yobuhle baseNtshona kunye nobuhle baseMpuma zidityaniswe ngokugqibeleleyo, zenza ubuntu obungaqhelekanga kunye nesimbo sobuhle baseMpuma. Umsunguli kunye nomnxibelelanisi "Ubuhle baseMpuma" uhlala esenza inkcubeko entsha yobuhle baseMpuma kubafazi.